Myanmar (Birmania) " Journey-Assist - Manerana an'i Myanmar. Mahaliana any Azia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Myanmar (Birmania)
Inona no tokony hatao any Myanmar
Toetany sy toetrandro any Myanmar
Vola any Myanmar. Fifanakalozana fifanakalozana
Masaka ao Myanmar
Loza any Myanmar
Mihaona amin'i Myanmar, She
Firenena lehibe i Myanmar ecotourismbe mpitia ankehitriny. Ankoatr'izany, misy zavatra maro fahiny momba ny tantara sy ny kolontsaina, ny maro amin'izy ireo dia mihoatra ny 2000 taona.
Nanjary safidy mendrika amin'ny morontsiraka Thai sy Indonezia ireo trano fandraisam-bahiny, toa an'i Ngwe Saung sy Ngapali!
Ho fanampin'izany, i Myanmar dia hanolotra ala-virijiny, tendrombohitra feno lanezy, ary tsy hamela anao hahazo aina ny mpizahatany.
Ny tombony lehibe any Myanmar dia ny vao manomboka vao haingana laza eo amin'ireo mpizahatany, izay midika izany fa mbola misy ny fahafahana mankafy tanteraka ny tena tontolo miloko misy any amin'ny firenena Azia Atsimo Atsinanana!
Sisintany amin'i Myanmar India(1463 193 km) sy Bangladesh (XNUMX km) any andrefana, miaraka By china(2185 km) any avaratra-atsinanana, miaraka Laos(235 km) atsinanana, miaraka Thailand (1800 km) any atsimo atsinanana. Avy any atsimo sy atsimo andrefana, ny morony dia hosasan'ny ranon'ny Reniranon'i Bengal sy ny Bay Moutama (Martaban), ary koa ny ranomasina Andaman.
1. Mandraisa anjara amin'ny fankalazana Thingyan - Fetiben'ny rano taom-baovao Burmese
Andro fialantsasatra mahafinaritra any Myanmar. Tsy raikitra ny datiny ary mifamatotra amin'ny kalandrie lunisolar any Myanmar. Saingy eo antenatenan'ny aprily foana izy io.
Tinjan tamin'ny 2020
Amin'ity taona ity dia hisy ny festival Tinjan amin'ny 13 ka hatramin'ny 16 aprily izao. Tinjan, avy any Pali sankanta, izay adika hoe "ny fandefasana ny tara avy any Pisces mankany Aries.
Ny fialan-tsasatra dia antsoina koa hoe fetin'ny rano. Ary tsy zava-poana!
Famaritana ny fialantsasatra Tinjan
Tamin'ny andron'i Tinjan, fomban-drazana maro no hatraiza hatraiza, izay tena malaza sy mahafinaritra no manondraka! 🙂
Manerana ny firenena, amin'izao andro izao dia misy hadalana rano tokoa! Mandray anjara amin'izany ny tsirairay, na tanora na antitra. Ary ... tsy azo atao ny tsy mandray anjara. 🙂 Rehefa dinihina tokoa, raha vantany vao miseho eny amin'ny arabe ianao dia azonao antoka fa mandritra ny minitra maromaro dia lena ianao manomboka amin'ny loha ka hatramin'ny tongotra.
Isaky ny trano dia hanafika anao ny mponina ao an-toerana mirongo fantsona, rano siny, paiso-drano, poti-drano ary sika). Fitaovana ahafahana mandena ny olona rehetra mandalo eto daholo ireo rehetra ireo!
Ary ny zava-misy dia mpizahantany ianao dia tsy hamonjy anao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny lafiny iray. Toa ny any an-toerana dia ankasitrahana manokana ny fampandrenesana ireo mpizahatany!
Ny hevitra lehibe indrindra amin'ny Tinjan
Ny foto-kevitry ny fanodinam-bola dia ny hoe ny fahotana rehetra tamin'iny taon-dasa iny dia voasasa tsy misy dikany.
Matetika, ny Birmanina dia mivondrona amin'ny "andian-jiolahy" iray manontolo, miezaka ny manasa ny fahotana maro araka izay azo atao amin'ny andian-jiolahy hafa na ny olona rehetra mifanena aminy. Azonao atao koa ny miditra ao amin'ny iray amin'ireo andian-jiolahimboto ireo ary, mitazona vilany, dia arotsaho koa ny mpandalo. 🙂
Ankoatr'izay, tamin'ny andron'i Tinjan, any amin'ireo tanàn-dehibe rehetra ao Myanmar, dia misy ny fananganana toerana izay mandihy, mihira ary hikarakara hetsika isan-karazany amin'ny fety sy rano.
2. Tsidiho ny farihy Inle
Inle Lake dia farihy. Angamba ity no iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto Myanmar!
Eto ianao dia afaka manofa sambo ary mijery ny fiposahan'ny masoandro avy any ambadiky ny tendrombohitra. Marihina fa any amin'ny faritry Inle Lake, ny vahiny dia tsy afaka manofa na mampiasa bisikileta. Ny bisikileta na sambo ihany no azonao atao.
3. Manidina amin'ny balaonina an'i Bagan
Bagan - Ny foibem-pinoana taloha an'i Myanmar (Burma).
Tanàna feno tempoly, pagoda sy stupa an'arivony ity! Tsy iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra eto an-tany ihany izy io, fa ny toerana arkeolojika manankarena indrindra any Azia atsimo atsinanana. Tsara tarehy fotsiny eto. Izay zoro rehetra ary na oviana na oviana manomboka amin'ny mangiran-dratsy ka hatramin'ny hariva dia photogenika!
Ny sidina fiaramanidina mandritry ny Pagan maharitra iray dia 300 $ hatramin'ny 400 $ isaky ny mpandeha (ny vidiny dia miankina amin'ny datin'ny fitsangatsanganana ary amin'ny ambaratonga fiononana sy serivisy mahafinaritra). Ny vidiny matetika dia misy fifindrana amin'ny hotely, sidina ary sakafo maraina.
4. Jereo ny Pagoda Shwedagon
Shwedagon Pagoda, iray amin'ireo toerana bodista masina indrindra. Ny anarana Shwedagon dia misy teny roa - Shwe (volamena) sy Dagon - izany no anaran'ny tanànan'i Yangon, misy ilay stupa. Yangon no renivohitr'i Myanmar taloha.
Ny pagoda dia stupa gilded goavambe 98 metatra ny haavony !!! Araka ny angano dia mitazona ny sisan'ireo Buddha efatra (mpiasa izy) Kakusandhisivana rano Konagamany, ampahany amin'ny tonika Kassapa sy volo valo Gautam).
5. Miala sasatra amin'ny torapasika fotsy any Myanmar
Ny halavan'ny morontsiraka any Burma dia 1930 km! Feno torapasika izy io, ny ankamaroany izay tsy fantatry ny mpizahatany mihitsy!
Fotsy fotsifotsy, rano madio, rivotra tony, be dia be ny toerana mahafinaritra mandritra ny snorkeling sy fitsirihana anaty rano, mahatonga an'i Myanmar ho toerana tena mahaliana amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina!
6. Jereo ilay vato volamena
Iray amin'ireo toeram-piangonana Buddhistana manan-danja indrindra ao Myanmar. Vato mandanjalanja eo amoron'ny hantsana.
Nisy fandaharana natao teto nandritra ny taonjato maro. Raha mino ny angano ianao, ny vato dia mitazona ny fifandanjana marefo mandritra ny taona an-jatony izay tantanana amin'ny volo tokana iray!
Eo an-tampon'ny vato, ny Pagoda Chaittiyo kely (5,5 metatra ny haavon'ny pagoda) dia milamina. Ny vato sy ny pagoda dia rakotra ravina volamena ary manaitra indrindra ny hariva rehefa manazava amin'ny jiro manokana izy ireo.
Ary mazava ho azy fa tsy izany ihany! Myanmar dia manana sehatry ny hetsika mahafinaritra ho an'ny fialamboly fialamboly marobe! Fitsangatsanganana an-tendrombohitra, fitsangantsanganana anaty ala, fitsangantsanganana amoron-drano ary maro hafa!
Manana toetrandro tropikaly monsoon i Myanmar. Ny faritra atsimo amin'ity firenena ity dia ao amin'ny faritra subequatorial. Misy fizarana 3 eto amin'ity taona ity.
Fotoana any Myanmar
Ny vanim-potoana voalohany dia manomboka amin'ny Novambra ary mifarana amin'ny volana feb. Ny isoterma isan'andro amin'izao fotoana izao dia tsy ambony noho ny +26. Somary mangatsiaka ihany ho an'ity firenena ity. Misy oram-baratra mandritra ny vanim-potoana izao.
Ny andro faharoa dia mafana be ny andro. Manomboka amin'ny volana martsa ary mifarana amin'ny Mey. Ny mari-pana amin'izao fotoana izao dia mety miakatra mihoatra ny +31.
Ny orana any Burma
Ny vanim-potoana fahatelo dia ny vanim-potoana orana. Any Myanmar, manomboka amin'ny Mey ary maharitra hatramin'ny Oktobra. Ity no vanim-potoana tsy dia mety indrindra amin'ny fizahan-tany.
Ny hafanana isam-bolana eo ho eo any Myanmar
Ny mari-pana rivotra any Myanmar
Azonao atao ny mahita fa ny isotherm isan-taona dia miovaova eo anelanelan'ny 31 sy 25 degre Celsius. Tsara ihany koa ny manamarika fa any amin'ireo faritra be tendrombohitra any Myanmar, ny mari-pana dia ambany kokoa, amin'ny antonony, amin'ny degre telo.
Ny orana isam-bolana any Myanmar
Ny orana any Myanmar isam-bolana
Mampiseho ny fandaharam-potoana fa ho an'ireo tia ny main-tany, ny fotoana mety indrindra hitetezana ny firenena dia ny volana Novambra ka hatramin'ny Aprily. Amin'ny volana sisa, ny habetsaky ny rotsakorana, ary miaraka aminy ny isan'ny andro be rahona, dia manan-danja loatra ho an'ireo mpandeha tia masoandro.
Weather in Myanmar + Forecast
Eto ianao dia afaka mahita ny toetr'andro ankehitriny any amin'ny faritra rehetra any Myanmar. Ity Widget ity dia mifanakalo hevitra tanteraka. izany hoe Azonao atao ny misafidy ny sosona tianao (rivotra, onja, masoandro, rakotra rahona, sns). Eo ambanin'ilay sarintany dia hitanao ny isan'ny toetr'andro. Afaka mihetsika ity refy ity, ka avy eo mamorona toetr'andro toetr'andro 3 andro!
Serasera finday sy Internet any Myanmar
Hatramin'ny vao haingana, ny serasera finday any Myanmar dia tena be mpampiasa ary voafetra ihany amin'ny renivohitra sy ny manodidina.
Saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nanjary nekena ny fifandraisana. Na dia niseho aza ny fanohanana ireo tambajotra 4G.
Vola any Myanmar (Chat / Kyat). Fifanakalozana fifanakalozana
Chat - Kyat. Ahoana ny endrik'ireo taratasim-bola amin'ny volam-pirenena Myanmar?
Ny volam-pirenena ao Myanmar dia antsoina hoe Myanmar "Chat" (Matetika ny loharanom-baovao Rosiana dia manome ny anarany hoe Kyat).
1 kyat dia zaraina amin'ny 100 pya. Androany mivezivezy ihany ny kitapo misy am-bavaky ny fihodinana 1, 5, 10, 15, 20, 45, 50, 90, 100, 200, 500 ary 1 000. Ao koa ny vola madinika amin'ny anaram-boninahitra amin'ny 5, 10, 25 ary 50 pya, ary koa ny andiany 1, 5, 10, 50 ary 100.
Ankoatr'izay, ny mari-pahaizana fanamarinana fifanakalozana any Shina dia ampiasaina betsaka any Myanmar. Amidy dolara amerikana ry zareo. Misy fanamarinana miaraka amin'ny sandan'ny tarehy 1, 5 ary 10 dolara. Ny fifanakalozana ataon'izy ireo amin'ny chat dia mety any amin'ny banky any Myanmar, amin'ny fifanakalozana fifanakalozana, amin'ny hotely ary amin'ny biraon'ny sampana fitsangatsanganana.
Ankoatra ny chat, any amin'ny toeram-pivarotana maro, dia vonona ny hanaiky dolara amerikana izy ireo.
Ny fifanakalozana vola vahiny ho an'ny chat dia tanterahina any amin'ny banky, birao fifanakalozana ary hotely. Rehefa mifanakalo dia tsy maintsy asehonao ny pasipaoronao. Misy ihany koa ireo mpanakalo vola eny an-dalambe any Myanmar, saingy tsy ara-dalàna ny hetsika ataon'izy ireo, ary ny tena zava-dehibe dia manandrana misandoka hatrany izy ireo. Ao amin'ny birao fifanakalozana any amin'ny seranam-piaramanidina, ny tahan'ny fifanakalozana dia tena tsy mahasoa loatra, noho izany tsy ampirisihina hanova vola azo tsapain-tanana ao.
Inona ny vola tokony ho any Myanmar
Manaiky ny dolara amerikana, euros, ary dolara amerikana ny rehetra na ny mpanakalo fifanakalozana rehetra ao Myanmar. Ny volan'ny firenena CIS, indrisy, tsy ekena na aiza na aiza. Mahasoa kokoa ny fifanakalozana fifanakalozana dolara amerikana amin'ny chats noho ny fanamarinana fifanakalozana, satria ny teo aloha dia nanaiky amin'ny vidiny tsara kokoa. Mpanakalo fifanakalozana ofisialy matetika miasa manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy.
ATM ao Myanmar
Nipoitra tato ho ato ny ATM, ary koa ny fangatahana karama miaraka amin'ny karatra any Myanmar. Efa misy ao amin'ny vohitra koa ny ATM ankehitriny, na izany aza, ny vaomiera lehibe sy ny fameperana henjana (indraindray dia afaka manala mihoatra ny $ 1 ianao matetika).
Fanamarinana ataon'ny mpandeha
Azonao atao ny mividy ny takelaka mpandehandeha amina dolara amerikana alohan'ny diananao any Myanmar, fa tsara kokoa ny mandray vola ampy. Ny takelaka fitsangatsanganana dia atakalo amin'ity firenena ity raha tsy hoe fanamarinana fifanakalozana. Ny fanamarinam-pandehan'ny mpandeha vola dia azo atao any Yangon ihany.
Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, ireo banky ao Myanmar, mazàna dia miasa hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 14 izy ireo.
Ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny ao Laos. Ny tahan'ny Dolara ankehitriny
Etsy ambany ianao mahita ny kajy mpanelanelana. Io dia manondro hatrany ny dolara ankehitriny amin'ny kyat na vola hafa amin'izao tontolo izao
Ny tahan'ny vola ankehitriny
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny sakafo ao an-toerana, izay mahazatra an'ny Azia rehetra, dia ny fampiasana zava-manitra mafana (na dia tena mafana be aza) indraindray. Ampiana amin'ny lovia rehetra izy ireo. Ny trondro dia matetika no voasaron'ny sakamalao, raha ny vary kosa dia matetika no arotsaka tongolo lay sy tongolo. Ny lovia akoho dia tena fahita any Myanmar, ohatra, o-no-hauk-sve - paty vita amin'ny vary misy akoho sy ronono voanio. Ny hazan-dranomasina koa dia malaza indrindra eto amin'ity firenena ity.
Ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana sy hotely any Myanmar no manolotra vilia nasionaly maro. Ny tena malaza amin'izy ireo dia ny Mionga (lasopy trondro miaraka amin'ny vermicelli) ary ny nofy letok (salady legioma manitra)... Ny tsindrin-tsakafo nasionaly dia zavamaniry dite voahosotra, izay azo ampiana tongolo lay, voamaina sesika, tongolo, voanjo ary valala nendasina.
Any Myanmar, be dia be ny toeram-pandaminana katrana miaraka amin'ireo lovia Indiana sy sinoa. Any amin'ny toerana misy ny mpizahatany dia tsy sarotra ny mahita trano fisakafoanana miaraka amin'ny sakafo Eoropeana.
Ny dite no zava-pisotro lehibe indrindra eto Myanmar. Indraindray aza ampiana zava-manitra ao aminy.
Manam-bokatra voankazo be dia be ny mponianina, maro amin'ireo no hafakely ho antsika (ohatra, mangosteen, durian, nangka).
Zava-pisotro misy alikaola any Myanmar
Ny alikaola dia ampiasaina hamokarana sy fivarotana labiera (ny karazany tsara indrindra dia Bintang, Tiger, Myanmar Draut, Mandalay, ABC-Stout, Dagon, San Miguel ary Singha), whisky, rum, divay ary zava-pisotro nasionaly miorina amin'ny ranom-boasary - hta- izy sy hta-ayet. Misy ara-barotra ihany koa ny fanahy vahiny, nefa lafo.
Ny trano fisotroana tsy lafo, natao indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana, ny kobanina dia tsy ampiasaina ho sakafo, izay toa tsy mahazatra sy tsy ampoizina ho an'ny vahiny. Nahay nihinana sakafo tsotra tamin'ny tanana izy ireo, ary ny vary ihany no entin'izy ireo. Ny menio toa ny any amin'ny trano fisotro mora, matetika dia tsy eo. Mila mandahatra ny vilia ianao amin'ny alàlan'ny fanondroana azy eo an-tananao.
Fiantsenana ao Myanmar
Any Myanmar, karazan-tsakafo maro isan-karazany no atolotra, miovaova ny vidiny sy ny kalitaony. Misy karazana entana roa tena mety mahaliana azy ireo ny vahiny.
Ny voalohany dia trinkets amin'ny vidiny ambany: souvenir vita amin'ny hazo, metaly fototra ary vato lafo.
Ny faharoa dia firavaka vita amin'ny metaly sy vato sarobidy. Ny entan'ny sokajy voalohany dia azo vidiana hatraiza hatraiza, raha ny firavaka kosa dia tokony ho voafidy tsara, tsy maimaika, manao varotra mahay. Ho an'ny fividianana firavaka lafo vidy, ny bazaar tena atolotra indrindra dia any Yangon - misy ny safidy malalaka indrindra sy ny vidiny mirary ary misy ny fifaninanana ampy eo amin'ireo mpivarotra.
Myanmar dia firenena fitrandrahana robina sy jaspa.
Myanmar dia firenena fitrandrahana robina sy jaspa. Na izany aza, mba hividianana azy ireo dia mila mahatakatra ireo vato ireo ianao, raha tsy izany dia ahiana be ny hidiran'ny sandoka. Any amin'ny toerana misy mpizahatany maro dia matetika ny mpisoloky ao an-toerana no manolotra voahangy "tena izy" fa raha ny tena izy dia vato mena na vera mora vidy. Ireo fivarotana fanjakana manokana dia manome antoka XNUMX% ny maha-azo itokiana.
Souvenir avy any Myanmar. Inona no hividy?
Ny asa-tanana malaza any Myanmar dia ny fananganana vazy misy valizy, vatampaty, ary zavatra hafa avy amin'ny volotsangana. Ny boaty dia nopetahana tamin'ny volotsangana, namboarina ary nolokoina avy eo. Ireto fahatsiarovana ireto dia tsy lafo ary tena manja.
Na dia eto amin'ity firenena ity aza, landy tsy lafo, nefa tena avo lenta dia mendrika ny hojerena. Ny karazana vokatra vita amin'ny landy malaza indrindra dia ny stoles. Ny salan'isa dia eo amin'ny 4 eo ho eo - resaka 000 (5-000 $ fotsiny io).
Amin'ny bazar dia amidy amin'ny lamba tapaka ny lamba landy. Ny landy koa dia ampiasaina hanamboarana karazana akanjo hafa ankoatry ny stoles, na dia tsy mahasarika ny eropeana aza ny endriny. Ny safidy mahasoa indrindra amin'ny fividianana vokatra vita amin'ny landy sy landy dia ny fividianana mivantana avy amin'ireo mpanenona sy mpanao akanjo any an-toerana, ary koa avy amin'ireo fivarotana am-baravarankely.
Any Myanmar, misy fenitra momba ny fitsipi-pitondran-tena sasany, izay mety tsy dia mahazatra ho anay, fa amin'ny ankapobeny dia mifandraika amin'ny firenena Azia Atsinanana rehetra. Tsy te-hanapotika azy ireo ny mpizahatany.
Fitsipika ankapobeny momba ny fitondran-tena any Myanmar
Famoronana tsy azo ekena sy manoroka any amin'ny toerana azon'ny besinimaro.
Tsy afaka mikasika ny lohan'ny olona ianao raha tsy ny anao.
Na ahoana na ahoana tsy tokony hiampita ny olona mipetraka ianao.
Ao amin'ny trano sy any amin'ny tempoly eto dia mahazatra ny mandeha tsy mandeha irery.
Any amin'ny tempoly sy ny toerana ara-pivavahana hafa dia tsy ekena ny fihomehezana ary ny famoahana feo avo.
Raha te haka sary ao amin'ny tempoly ianao dia tsy maintsy mangataka alalana.
Ny lehilahy ihany no afaka hikasika ny moanina bodista; ny vehivavy tsy tokony hanao an'izany.
Ilaina ny maka zavatra avy amina olon-kafa ary manome azy ireo, ary koa amin'ny ankapobeny mikasika zavatra sy olona iray, amin'ny tanana havanana fotsiny, satria ny ankavia dia heverina ho maloto.
Amin'ny ankapobeny, ny fihetsiky ny fihetseham-po loatra, ny kabary be, ny fihetsika mahery setra amin'ny serasera dia tsy raisina eto.
Tena kivy tanteraka ny maneho na dia ny tsy fanajana kely an'i Buddha sy ny sariny rehetra aza, ho an'ny Buddhism ary ny zavatra rehetra mifandraika amin'io fivavahana io.
Mikasika ny sakafo eo an-toerana, raha tsy te-handany vola be ianao amin'ny tobim-pitsaboana iray ao an-toerana dia mila manasa tsara ny vokatra rehetra (indrindra amin'ny bazaar) rehefa mividy (indrindra amin'ny bazaar) (raha tsy maintsy ampangotrahina ny rano). Tena kivy be ny misotro rano avy amin'ny paompy. Na izany aza, na ny rano famaohana nandrahoina aza tsy safidy azo antoka. Aleo mividy rano tavoahangy hosotroina.
Teny ofisialy - Burmese
Renivohitra - Neypido (Naypyidaw)
Karazana governemanta - repoblika filoham-pirenena
Fifamoivoizana fiara - RHD
Kaody finday: 95 +
Mifanaraka amin'ny ririnina ny vanin-taona lehibe any, araka izany, mieritreritra aho fa hanangana ny fizahan-tany fizahan-tany haingana i Myanmar